के तपाईलाई पनि झनक्क रिस उठ्छ ? यो अवस्य हेर्नुहोस् « Sansar News
के तपाईलाई पनि झनक्क रिस उठ्छ ? यो अवस्य हेर्नुहोस्
७ कार्तिक २०७८, आईतवार १६:३१
रिस मानिसको लागि यस्तो प्रकृति हो जो विभिन्न समयमा परिस्थिति अनुसार उत्पन्न हुन्छ । रिस उठ्नु अरुको लागि राम्रो होस् या नराम्रो तर आफ्नो लागि भने धेरै खतरनाक पनि हुन्छ । रिस मानिसको सबैभन्दा ठूलो शुत्रु मानिन्छ । यदि तपाइलाई रिस उठ्छ भने यसलाई हल्का नसम्झनुहोस् ।
आउनुहोस् समय–समय उठिरहने यस्तो रिसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने जानिराखौं ।
यसरी पहिचान गर्नुहोस् रिस–रिसलाई तब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जव यसको पहिचान गर्न सकिन्छ । जो मानिसलाई कुनै कुरा प्राप्त गर्नका लागि तीब्र इच्छा हुन्छ यस्ता व्यक्तिलाई छिटो रिस उठ्ने मनोविज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरु छिट्टै धैर्यता गुमाउँछन् । केही मानिसमा धैर्यको कमी, खाना छिटो खानु, मन अनियन्त्रित हुनु, कामकाजका बेला चिडचिडापन आउनु, रिसको बेला आफैलाई नोक्सान पु¥याउनु लगायतका व्यवयहार देखा पर्छन् ।
यसरी राख्नुहोस् रिसलाई नियन्त्रण–रिसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि यो तरिका धेरै राम्रो तरिका मानिन्छ तर यो गाह्रो पनि हुन्छ । यदि तपाइ चुप बसेर केही बोल्नु भएन भने रिसाउने व्यक्तिका लागि धेरै राम्रो हुन्छ । किन कि, तपाई जति उसको विपरीत बोल्नुहुन्छ य त्यति नै भित्र भित्रै रिसाइरहेको हुन्छ । साथै योग ध्यानको सहाराले पनि रिसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । ध्यानले व्यक्तिको जीवन शान्त र संतुलित हुन्छ अनि रिस नियन्त्रणमा आउछ ।
जहाँ लडाइ या रिसको स्थिति बनिरहेको छ त्यहाँबाट तपाई तुरुन्त बाहिरीनुहोस् । यसले व्यर्थको विवाद नहुने र तपाइ रिसाहा व्यक्तिबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै रिसाएको व्यक्तिको अगाडि बस्नु पर्दा आफ्नो आँखा र कान बन्द गर्नुहोस् । यसले तपाइले विपरित व्यक्तिको कुरा सुन्न पनि सक्नुहुन्न र देख्न पनि सक्नुहुन्छ यसकारण रिसाएको व्यक्ति पनि शान्त बन्छ ।
रिसले शरीरमा नराम्रो असर गर्छ– रिसले शरीरमा नराम्रो असर पार्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ ।
अनुसन्धानकर्ताका अनुसार रिसका बेला मस्तिष्कमा यस्तो रसायनिक तत्वको उत्पन्न हुन्छ कि त्यसले शरीरमा नराम्रो असर पार्छ । आँखा रातो हुने तथा मुटु पोलेको महसुस हुन्छ । यसले ब्लप्रेशर बढ्ने र आक्रामक भावना उत्पन्न हुन्छ । सोच्ने र सम्झने शक्ति कमजोर हुनुका साथै लगातार रिसाउनाले पाचनतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । यसले कब्जियत, एसिडीटी बढाउने र भोक हराउने हुन्छ । रिसले व्यक्तिलाई राम्रोसँग निद्रा नलाग्ने पनि हुन्छ । यसले पूरै स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ ।
ओखर किन खाने ? यस्ता छन् फाइदै फाइदा
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नलाएकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्यो…
१२ वर्ष उमेर समुहका बालबालिकालाई पनि फाइजर खोप…
जिल्ला अस्पतालमै निःशुल्क पाइने औषधिको अभाव
महले घटाउँछ माेटाेपन, जान्नुहाेस् मह खानाका फाइदा